Nzuzo Nzuzo maka 2019: Asymmetry, Jarring Colors, and Ext አጋ Jupụtara | Martech Zone
Anyị na onye ahịa na - arụ ọrụ na - etolite na azụmaahịa dị iche iche na - arụ ọrụ na azụmaahịa na - arụ ọrụ yana otu n'ime usoro dị mkpa bụ ịhazigharị weebụsaịtị ha nke ọma - mkpụrụedemede ọhụrụ, atụmatụ agba ọhụụ, usoro ọhụụ, ihe eserese ọhụụ, yana ihe ngosi emekọtara mmekọrịta onye ọrụ. Ihe ngosi ndị a niile ga-enyere onye ọbịa aka na saịtị ha lekwasịrị anya na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ karịa ndị pere mpe.
M kwere a otutu imewe ụlọ ọrụ na-atụ uche aghụghọ nke nwere ike ime ka a esenowo wepu exit saịtị na ịhọrọ a osompi naanị n'ihi na saịtị na-adịghị "na-eche" nri ha… ọ na-eme kwa ụbọchị.
Kemgbe afọ ise gara aga, Coastal Creative na-eme nyocha na ịhapụ nnukwu ndebiri nke gosipụtara mgbanwe ndị ahịa na azụmaahịa na-ahụ ma a bịa n'ihe eserese eserese. Ha bipụtara akwụkwọ ozi kachasị ọhụrụ ha nso nso a 2018 na usoro imepụta - na ebe a bụ isi ihe:
N'oge a na-agbagha ọtụtụ mgbakọ na ụwa, echiche imewe nke oge a na ihe ndị masịrị ndị mmadụ na-egosipụta ọchịchọ ịchọta mmetụta nke usoro na ịma mma n'etiti ọgba aghara niile. Ihe eji eme osimiri
N'afọ gara aga, nke Usoro imepụta 2018 bụ:
Na-etinye ihe dị iche iche - Akara ókwú, ụdị na eserese ndị ọzọ na-agwakọta ibe ha.
Duotone - ekele nye Spotify maka ịkwalite omume a, ihe oyiyi duotone dị n'ụdị. Hụ: Photoshop Duotone nkuzi
Ihe Atụ Ochie - ijikọta ụdị ihe osise ọhụụ na atụmatụ agba agba.
Nlereanya Azụ - taịl nile nke taịl nile na-adịghị arụsi ọrụ ike mana na-ekwusi ike n'ihe ngosi.
Ndị Na-acha Ọcha Na-acha Ọcha - agba agba na textured gradient nsio.
Echiche nke Animations - ihe omimi di iche iche nke egosiputa ebumnuche nke ihe ndi di na vidiyo.
Nhazi Isometric - ihe osise nwere akụkụ atọ dọtara na akụkụ abụọ.
Nkesa Peeji - mmechi nke ihe nnọchianya abụọ ma ọ bụ karịa nke ihe eserese ma ọ bụ ihe osise.
Afọ a, nke 2019 na-ewu ewu na ọnọdụ site na Coastal Creative bụ:
Nkwuwa okwu - Brutalism na-ajụ ụkpụrụ ndị bụ isi nke njirimara-omume, ịgụ ihe, na ezigbo uto ma kama ọ na-atọ ụtọ na HTML-ọcha dịka marquees na ndị cursors buru ibu. Iji ihe oyiyi na ihe ndị mejupụtara pọọsụ na ebumnuche mejupụtara mgbasa ozi, omume obi ọjọọ nwere ike oge ụfọdụ inwe ụdị websaịtị na-ebupụtaghị nke ọma. Nke a dijitalụ imewe na-emekarị na-nakweere dị ka a "glitch aesthetic."
Mgbanwe Gradients - Ndị gradients na duotone anaghị aga ebe ọ bụla na 2019. Ndị gradients na-eku ume ndụ n’ime ihe atụ ndị ga - abụ mbadamba ma na - enweghị mmụọ.
Geometry na - Ndị na-emepụta dijitalụ na-agbakọ ma na-ekpuchi ụdị geometric n'ụzọ egwu egwu dị iche iche iji mepụta saịtị ndị na-atọ ụtọ. Omume a na-eme ka echiche ndị ọrụ na-agba ọsọ ma nwee ike igosipụta ịdị mma, okike, na imeghe.
Ternkpụrụ mepụtara - Kpụrụ taịlị na-egbuke egbuke na nke mara mma na-eme ka nlọghachi siri ike, dị ka ndabere na ihe jupụtara na ihe atụ. Enwere ike iwe iwe dị oke egwu nke usoro ndị a megide azụ azụ ọcha ma ọ bụ yana ihe ndị ọzọ kwekọrọ.
Romụ mmadụ ochie atụ - Omume ọhụrụ a n’ịtụle ihe atụ nke ndị mmadụ na-eji nkọwa na-enweghị atụ na ụcha arụrụala iji mepụta ọnụ ọgụgụ ndị ezi uche na-adịghị na ha. Ma ọdịdị ahụ ga-abụ nke katoonu ma ọ bụ nke ọzọ, nkọwapụta okike nke ụmụ mmadụ ga-apụta na weebụ niile na 2019.
Ihe ngosi Isometric - N'iji echiche ziri ezi ma ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume, ihe atụ nke isometric na-egosi na ọ ga-enwe ike ịnọ na ntanetị.
Nkọwapụta Grid mebiri - Na ndị na-emepụta 2019 na-eche echiche n’èzí igbe ahụ na ntanetịime ntanetị nke zig, zag, na overlap. Ọ bụrụ na nke ahụ dị gị ka ọgba aghara, ọ bụghị n’ezie. Ọ bụ ezie na ihe dị iche iche nwere ike ghara ịhazi nke ọma, ọdịdị ahụ na-abụkarị ihe ọ bụla.
Ngwakọta nke oge a - Magazin na akwụkwọ akụkọ collages nwere ike ịbụ ihe gara aga, mana multimedia collages na-aghọwanye ewu ewu n'ịntanetị.
Nke a bụ ihe omuma ihe omuma atu na ihe omuma nke uzo obula:
Tags: 2019Usoro imepụta 2019Ihe omume 2019Animationanimationsnzụliteagwakọtagradi grads na-egbuke egbukeagbaichenhazi usoronhazi akụkụduotoneihe ọsịseihe ngosi ihe osiseatụna-etinye iheisometricisometric ndịnaijeihe nakawa etu esifotoochieochie-oge agbawara peejiederedevektọụdị ejiji weebụ